Liverpool oo Hogaanka sii adkaystay, Xilli ay dhaanto la tumatay dhiggeeda Norwich City
HomeWararka MaantaLiverpool oo Hogaanka sii adkaystay, Xilli ay dhaanto la tumatay dhiggeeda Norwich City
Kooxda Liverpool ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxay kusii dhawaaneysa hanashada horyaalka Premier League ee xagaagan kadib markii ay gaadhay guusheedii 11-aad oo xidhiidh ah galabta markii ay ka talaabsatay kooxda Norwich City.
Kooxda Liverpool ayaa 3-2 gool kaga adkaatay kooxda Norwich City waxay goolashaa labo ka mid ah ka heshay Raheem Sterling daqiiqadihii 4-aad iyo 62-aad halka goolka sedexaadna uu ka yimid gool ma gafeheeda Luis Suarez daqiiqadii 11-aad ee qeybtii hore ee ciyaartaas.
Iyadoo Suarez uu goolkaan kaga dhigan yahay goolkiisii 30-aad ee xagaagan ka dhaliyo horyaalka Premier League. Kooxda Norwich ayaa boodhka iska jaftay qeybtii dambe ee ciyaarta markii ay ku sigatay inay kadaba timaado kooxda Liverpool, iyadoo la timid labo gool daqiiqadiihii 54-aad iyo 77-aad, waxayna goolashaas kala heshay ciyaartooydeeda kala ah Hooper iyo Snodgrass. Balse ugu dambeyntii kooxda Liverpool ayaa waxay guusha ku raacday 3-2, xilli Suarez uu noqday laacibkii ugu horeeyay ee Liverpool u dhaliya 30 gool hal xilli ciyaareed.
Liverpool ayaa haatan waxay horyaalka Premier League ku hogaamineysa shan dhibcood oo nadiif ah madaama ay leedahay 80 dhibcood halka Chelsea oo jiifta booska labaad ay iyana leedahay 75 dhibcood.